Naajeeriya u gudubtay Fiinal, kaddib markii ay 4-1 kaga badisay Maali. – Radio Daljir
Febraayo 6, 2013 8:34 b 0
S/Afrika, Feb 06 – Waxaa mar dhawayd si rasmi ah u soo gabagabowday ciyaartii u dhaxaysay dalalka Naajeeriya iyo Maali, taasoo ay guushu raacday kooxdii ku ciyaaraysay magaca Qaranka Naajeeriya.
Ciyaartaan oo ahayd mid aad u kulul, lana saadaalinayey saamaynta ay yeelan karto ayaa ku soo dhammaatay 90-kii daqiiqo ee loogu talo galay 1 gool oo ay la timid Maali iyo 4 gool oo ay dhashadeen kooxada Qaranka Naajeeriya, taasoo waddankaasi ka dhigaysa mid u soo tallaabay wareegga kama dambaysta ah ee Fiinaalaha, halka dalka Maali-na uu ka haray tartankii ciyaaraha qaramada Afrika.
Ciyaaryahannada Naajeeriya, ayaa ciyaartaasi galabta ka muujiyey wacdaro la yaableh, soona bandhigay qaab ciyaareed sare oo sababay in loo saadaaliyo noqoshada kooxda koobkaan hanan doonta.
Afarta gool ee ay ku badisay Naajeeriya, saddex ka mid ah waxay la timid qaybtii hore ee ciyaarta, halka goolka afraadna ay dhashatay qaybtii dambe ee ciyaarta, iyadoo isla qaybtaas dambana ay dhashatay halka gool ee Maali la timid.
Ciyaarta Maali iyo Naajeeriya ayaa ka duwanaatay sidii la saadaalinayey, waxaana inta badan la tilmaamayey labada kooxood in ay isku ciyaar dhaw yihiin, hase ahaatee ma noqon, Maaliyiintuna ma muujin heerki ciyaareed ee laga dhawrayey.
?Waddanka Naajeeriya ee u soo baxay ciyaarta kama dambaysta ayaa dhawraya midkii soo baxa caawa labada dal ee Gaana iyo Bukiino-faaso, kuwaasi oo mar dhaw kulmi doona.
Qaybtii koowaad ee ciyaarta Maali iyo Naajeeriya oo dhammaatay iyo Naajeeriya oo 3-0 ku hoggaaminaysa Maali.
S/Afrika, Feb 06 – Qaybtii hore ee ciyaarta ay wada dheelayaan dalalka Maali iyo Naajeeriya ayaa hadda soo idlaatay, iyadoo kooxda Naajeeriya ay la timid 3 gool, halka kooxda magaca Maali ku ciyaaraysayna aysan waxba la imaanin.
15-daqiiqo oo nasasho ah ayaa haatan loo dareeray, iyadoo xilli dhawna la iskugu soo laaban doono qaybtii labaad ee ciyaarta.
Dadka falanweeya ciyaaraha, ayaa tilmaamaya kooxda qaranka Maali in aysan muujin dadaalkii iyo ciyaarihii horay looga bartay, hase ahaatee wali ma kala cadda cidda guushu raaci doonto.
Wareeggii 3-aad ee ciyaaraha Qaramada Afrika oo galabta bilawday.
S/Afrika, Feb 06 – Waxaa galabta oo (Arbaco ah) dib uga bilawday waddanka K/Afrika wareeggii 3-aad ee ciyaaraha waddamada Afrika, kaddib markii labadii maalmood ee ugu dambeeyey lagu jiray wakhti nasasho ah.
Wareeggaan 3-aad oo ay iskugu soo hareen waddamada Najeeriya, Maali, Gaana iyo Burkiina-faaso, ayaa afarta kooxoodba ay maanta wada ciyaari doonaan, waxaan ciyaarta hore isku haleelay galabta Najeeriya iyo Maali, taasoo haatan socota, halka ciyaarta dambana ay isku arki doonaan Burkiina-faaso iyo Gaana.
Afarta waddan ee iskugu soo haray ciyaarta, ayaa labo ka mid ahi hari doonaan, halka labada kalana ay u soo tallaabayaan wareegga kama dambaysta ah ee Fiinaalaha.
Ma cadda waddamada hari doona maanta iyo kuwa soo bixi doona, hase ahaatee waxaa la tilmaamayaa afarta kooxoodba in ay yihiin kuwo aad u adag, lehna ciyaar wanaag aan kala dhicin.